जानी राखौ:- महिलाहरुले पहिलो सहवासमा यी १० कुराहरु चाहन्छन् » Etajakhabar
शुक्रबार, मंसिर २९, २०७४	| Friday, Dec 15, 2017
जानी राखौ:- महिलाहरुले पहिलो सहवासमा यी १० कुराहरु चाहन्छन्
स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहने एक अध्यनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो-अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने विषयको अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो छ :
१- निर्वस्त्र हुने चाहना: महिलाहरु पुरुषको अगाडी कपडा खोल्न लाज मान्छन् । तर, उनको चाहना पार्टनरले नै कपडा खोलिदियोस भन्ने हुन्छ । हिल चप्पल लगाएको बेला होस् या सेक्सी लाञ्जरी महिलाहरुलाई यस्तो चाहना बढी हुन्छ ।
२- चरम सन्तुष्टिको चाहना: महिलाहरु हरेक पटक चरम सन्तुष्टिको यौन सम्बन्धबारे सोच्छन् । तर, सधै यस्तो वास्तविक जीवनमा भने नहुन पनि सक्छ ।
३- आत्मसमर्पण: अधिकांश महिलालाई अपेक्षा हुन्छ कि कुनै पनि पुरुषले उनीसँग मालिक जस्तो व्यवहार गरोस् । उठाएर ओच्छ्यानमा ल्याओस र कपडा खोलेर क्रिडा गरोस् । अलि हेप्ने र होच्याए जस्तो गर्ने पुरुषसँग सेक्सका लागि महिला लालायित हुन्छन् ।
४- भूमिका परिवर्तन: महिलाहरु सामान्यतः निष्क्रिय हुन्छन् । तर, कहिले काहीँ महिलालाई पुरुष जस्तै सक्रिय भएर यौन क्रिडामा सहभागी हुन मन लाग्छ ।
५- अपरिचितसँग सेक्स: अधिकांश महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा नराम्रो लाग्छ । तर, कतिपय समयमा अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्ने विषयमा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन् । अध्ययनले भन्छ, ‘अपिरिचितसँग यौन सम्बन्ध राख्दा सबै सीमा भुलेर रमाइलो गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ हन्छ ।’
६- महिला–महिला सेक्स: महिला पुरुषसँग मात्र होइन कतिपय महिलासँग पनि आकर्षित हुन्छन् । महिला–महिलाबीच आपसी यौन सन्तुष्टी दिने व्यवहारबारे पनि महिलाहरुले सोचिरहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
७- एक रात: दुनियाँले जे सुकै सोचोस्, आफूले मन पराएको पुरुषसँग एक रात मनाउने चाहना हरेक स्त्रीमा हुन्छ । पहिलो यौन सम्बन्धबारे उनीहरु सधै सोचिरहन्छन् ।
८- सभ्य बलात्कार: कुनै पनि महिलालाई बलात्कृत हुने चाहना हुँदैन । तर, कुनै पनि मन परेको पुरुषले जवर्जस्ती यौन सम्बन्ध राखोस् भन्ने चाहना चाँहि उनीहरुमा हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
९- बाथरुम मस्ती: कुनै पनि महिलालाई बाथरुममा यौन सम्बन्ध राख्ने भित्री चाहना सधै हुने अध्ययनको भनाइ छ । सावरको मुनी बढी उत्तेजित अनुभव गर्छन् महिलाहरु ।
१०- नदी वा समुन्द्री किनार: अधिकांश महिलाहरुलाई नदी वा समुन्द्र किनारमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने चाहना हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आफूलाई मन पर्ने पुरुषसँग यस्तो स्थानमा एक्लै हुन पाइयोस् भन्ने उनीहरु सोच्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०७४ समय: १८:४०:०६
लुकेर रहेका कुष्ठरोगीको खोजी गरिने
कसरी हुन्छ बङगाराको क्यान्सर ? यस्ता छन्, कारणहरू
मुटुको लागी चुरोट भन्दा पनि खतरनाक छ, अगरबत्तीको धुवाँ
क्यान्सरका ५ ठूला लक्षणबारे , जानी राखौँ
टमाटर र महको यस मिश्रणले ५ मिनेटमा नै बढाउँछ, यौन शक्ति
कानको क्यान्सरको प्रकार, लक्षण र यसको उपचारको चिकित्सा प्रणाली यस्ता छन्
मिर्गौलाको पथरी फुटाएर गरिने उपचार विधि शुरु
एलर्जीको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने, यी विशेष कुराहरू यस्ता छन्
खानु हुँदैन यी ९ प्रकारका खाना, नभए चाँडैनै झर्छ कपाल
हिन्दू धार्मिक तीर्थस्थल सुनसरीको बराहक्षेत्र मन्दिरका परेवा धमाधम परे, कारण यस्तो
हातको ‘कान्छी’ औँलाबाट पनि थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव
यौन सम्पर्क राख्नुअघि भुलेर पनि खानु हुँदैन, यी चीज
केटा साथीले कण्डम प्रयोग गर्न नमान्दा काठमाडौँकै एक कलेजमा स्नातक तेस्रो वर्षमा पढ्ने २० वर्षे सिमाले भोग्नुपर्यो यस्तो सास्ती
पेटको बोसो घटाउने नम्बर १ आयुर्वेदिक उपाय, जसलाई यसरी घरमा सजिलै तयार गर्नुहोस्
२० वर्षे यि सुन्दरीले जिताइन् १७ बर्षपछि भारतलाई ‘मिस वल्र्ड’को उपाधि, नेपालकी निकिताको स्थान यस्तो छ
आफ्नो दुध बेचेर जिविकोपार्जन गर्छिन् यि युवती, उनको दुध पिएका पुरुषले भने ‘हाम्रो यौन क्षमता ह्वात्तै बढ्यो’
नेपालगञ्जका उम्मेदवारका वाचा : प्रदेश राजधानीदेखि पर्यटन ‘हब’सम्म
‘कृ’को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा नायक अनमोल बडीगार्ड सहित प्रवेश, पुरै कार्यक्रम बन्यो अनमोलमय (भिडियो)
होसीयार ! वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दलालहरुले यसरी ठग्छन् :– हेर्न्नै पर्ने भिडियो …
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाइने
बेलायतका राजकुमार ह्यारीको बिहेको मिति तोकियो
टीकापुर घटनाका मुख्य फरार अभियुक्त तथा नवनिर्वाचित सासंद रेशम चौधरी फेरी परे यसरी अप्ठ्यारोमा
राजेश हमालको अर्को डुप्लिकेट भेट्टिए, हेर्नुहोस् डुप्लिकेट राजेशसँगको यो रमाइलो अन्तरवार्ता
नेपालमा अब कुनै पनि जाति वा समुदायले विभेदमा परेको महसुस गर्नु पर्दैन, पुल बाटो कमजोर हुने कुरा अब सह्य हुँदैन : ओली
नवलपरासीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पुतला दहन
प्रेम बहादुर वि.क.
सुमन सापकोटा / खगेन्द्र दहाल / रबिन्द्र यादव / उषा लामिछाने
अधिवक्ता सुजित के.सी.
के.के अधिकारी / इभाना थापा
ज्योतिष पण्डित :-
केशव खड्का / आर्यन खड्का
भिडियो एडिटर :
राज कुमार / दिपेन्द्र घिमेरे
ग्राफिक्स डिजाइनर :
वेबसाईट डेभलोपर तथा प्रविधि :
Nepalgunj -2, Banke, Nepal
Proudly Hosted At Royal Clouds.